Webbing Barcelona anoti
Chivabvu 11, 2016 pa 4:09 pm
Perfect ndokutenda zvikuru! Tichakamirira nokusashivirira shanduro itsva iyi 🙂
Chivabvu 13, 2016 pa 1:50 pm
Hukuru! nechekare upgraded.
Ndinokutendai nokuti basa rako rakaoma.
Chivabvu 21, 2016 pa 7:24 ndiri
anotarira zvakanaka. Ndatenda.
Quick mubvunzo: Server wangu Opcache yakaiswa, rinoita uye kushanda. Ko remangwana kusunungurwa Os Transposh rutsigiro Opcache?
Chivabvu 24, 2016 pa 5:58 pm
Opcache haasi aishandisa cache, asi chero mushandisi manyorero cache kuti tiri kuziva (APC, APCu, xCache) vanotsigirwa.
Nyamavhuvhu 19, 2016 pa 9:28 pm
Ndinoziva plugin ichi kubva ~ 2010 asi ndakaenda pamusoro WPML pakutanga sezvo Ndakafunga zvikuru kwenyanzvi… (kwete chete League sezvo Transposh, WPML haasi kwangoitwa)
Kumbova I zvikuru zvakaipa… WPML dzimwe nguva akanga netsikidzi zvinokosha (Ndakanga kurishandisa pamusoro nzvimbo pamwe kupfuura 20.000 anoshanyira zuva) uye kamwe WordPress akanga akagadziridzwa mutsva shanduro, risingazivikanwi tsikidzi kuti wakachengeta nzvimbo yangu offline NO yakanga yakatarwa WPML famba 10 mazuva… Ini asingagoni kuwana refu vakamirira nguva yakadaro, sezvo motokari yangu yakanga vainyanya makemikari uye Google kukuru chaizvo pamusoro downtime…
Transposh ndiye pasina mubvunzo yakanakisisa rokushandura plugin, kunyange hazvina vakakwana, zviri wakanaka uye tsime inotarisirwa.
Nyamavhuvhu 26, 2016 pa 1:06 pm
Mumwe yakanakisisa vakasununguka Translation plugins uye maonero andaiita akanakisisa chete.
Pane aigona kuva vamwe kuvandudzika somuenzaniso hozhwe rokushandura uye dzimwe nyaya dzine chokuita kushandura Tambo raigona wakaiswa.
Uyu shanduro yangu kufarira plugin.
Nyamavhuvhu 26, 2016 pa 9:45 pm
Havent akahushandisa asi, asi chokwadi kuti anoona Baidu rinotyisa. Kwete chokwadi rakanaka sei unhu shanduro Baidu kunoita anofananidzwa Google.
Saka yayo zvakanaka kuti chete anoshandisa Baidu nokuda Chinese, netsvimbo pamwe Google kwose kwose.
Mbudzi 7, 2016 pa 12:16 pm
Ndinokutendai 🙂 nokuti naka basa renyu
Changeset vari transposh-Wordpress [7b3d695]: Support for GEOIP based redirection Chikunguru 19, 2018
tikiti #328 (svn repo) vharika Chikunguru 1, 2018
tikiti #328 (svn repo) akasika Chikunguru 1, 2018
Changeset vari transposh-Wordpress [7ef2701]: Zvinhu zvizere Shanduro vanofanira kugara zvakazara Version Chikumi 27, 2018
Changeset vari transposh-Wordpress [97c2380]: v1.0.1 kusunungurwa kwava pedyo Chikumi 27, 2018